Inkonzo yokuqala, Umgangatho wokuqala!
ngu admin nge-20-05-29
Imveliso ye-Anping Dongjie Wire Mesh Co.Ltd. emva kweminyaka engaphezu kweshumi yeenzame, ngokuthe ngcembe kuphuhliswa kwaye kwandiswa, iinjineli ezikhoyo zobungcali kunye nabasebenzi bobuchwephesha, bukhethekileyo kwimveliso yesixhobo seefilitha zezixhobo zokucoca ulwelo kunye noshicilelo olunzulu lwamashishini angena kuqala ...
Yintoni i-Metal Mesh?
Umyalezo wesinyanzeliso wensimbi ukwenza imingxunya yemilo eyahlukeneyo kwizixhobo ezahlukeneyo ukufezekisa iimfuno ezahlukeneyo, Ingasetyenziselwa njengesixhobo sokufunxa isandi sendlu yophahla kunye nodonga lwendlu yezakhiwo. Ingasetyenziselwa ukwakha amanqanaba, iibhalkhoni, iitafile zokhuselo lwendalo ...
UkuSebenza ngokuSebenzayo kweWesile yokuhlobisa i-Mesh
I-Metal yokuhombisa yentsimbi ilukiwe ngebha yensimbi okanye yentsimbi, ngokokutsho kwendwangu, ngebar yetshiphu ethe tye ngokusebenzisa intambo yensimbi ethe nkqo ukwenza iipatheni ezahlukeneyo, ukusetyenziswa kwezixhobo kubandakanya intsimbi engenasici kunye namandla aphezulu e-corros ...